Barcelona iyo Arsenal oo isku garbinaya xidigga Khadka dhexe ee kooxda kooxda Lyon – Gool FM
(Paris) 21 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ee waddanka Spain ayaa lagu warramayaa in ay liiskeeda ku darsatay isla markaana doonayso in ay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ee kooxda Lyon Houssem Aouar.
Ciyaaryahankan oo 20 jir ah ayaa waxa uu ka mid yahay laacibiinta ugu fiican ee soo koraya ee qaaradda Yurub, waxaana 32 kulan oo Horyaalka Faransiiska iyo Champions League ee uu saftayna uu dhaliyay 6 gool, halka 5 kubbadoodna saaxiibadiisa u baasay.
Aouar oo ka soo jeeda Algeria ayaa waxaa sidoo kale sida lagu qoray wargeyska ‘L’Equipe’ lagu sheegay in naadiga Arsenal ee Ingiriiskana ay danaynayaan ciyaartoygan ka tirsan 21 jirrada Faransiiska.
Laakiin Barcelona ayaa xaqiijinayaa in ay la xiriirtay wakiillada Aouar oo haatan qandaraaskiisa Lyon uu ka harsan yahay 4 sanadood, balse haddii lacag badan loo gaaro Lyon waxa ay ku qasbanaan doontaa inay iibiso.
Daawo xirfadda Houssem